Qur'aanka oo Yahuuda ku tilmaamaya sida Dameer. (Mucjisada qur'aanka) - Caasimada Online
Home Diinta Qur’aanka oo Yahuuda ku tilmaamaya sida Dameer. (Mucjisada qur’aanka)
Qur’aanka oo Yahuuda ku tilmaamaya sida Dameer. (Mucjisada qur’aanka)
Maalinba maalinta ka dambeysa Alle wuxuu bannaanka keenayaa micnaha iyo cilmiga ku hoos duugan iyo mucjisada ku laaban aayad kasta iyo xaraf kasta oo kamid ah Quraankiisa kariimka ah. Ilaahay waa diiday wax kale inuu dhameys tira oo ka sare mariya diintiisa diimaha kale oo dhan mooyaane.
Yahuuddu waxay kamid ahayd umadahihii sugayay in nebi Carbeed lasoo saari doono, kaasoo ay rumeysnaayeen in isaga lagu khatimi doono nebiyada oo dhan. Waa midda keentay in Yahuuddii reer Madiina markii uu nebigeenna suubban (NNKH) soo hijroonayay ay har iyo habeenba duleedka magaallada Yathrib (Madiina) ku sugi jireen, si ay uga qeyb qaataan kadib markii ay maqleen inuu magaalada Makkah kasoo kicitamay.
Ansaartii Madiina ee reer Al Aws iyo Al Khazraj inay Islaamaan oo rumeeyaan nebi Muxammad (NNKH) towfiiqda Alle kasokoow waxaa u sabab ahaa Yahuuddii degeneyd magaalada Madiinah, oo ku oran jirtay Ansaarta ”Waxaa lasoo diri doonaa rasuul, dhulkan ayaana laga soo saari doonaa nebigii ugu dambeeyay nebiyada, markaasaanu rumeyn doonnaa, oo aan idinka adkaan doonnaa”. Ansaartii warkaasi lagu oran jirey, markay maqleen in nebi laga soo saaray magaallada Makkah, durba way u deg degeen rumeyntiisa wayna rumeeyeen. Laakiin Yahuuddii markay waxay fileysay ka weysay iskana dhex arki waysay risaalada inay mug ku yeelata, bay dafiraad lasoo istaagtay, oo ay dafireen nebigii ay rumeysnaayeen. Alle dhowr mar ayuu Quraanka ku fadeexeeyay Yahuudda, isagoo inooga warramay inay yahiin dad khiyaana badan, una og risaalada nebi Muxammad inay xaq tahay sida ay carruurtooda u yaqaanaan oo kale.
Markii ay dafireen risaaladii Rabbaaniga ahayd, iyo nebigii Ilaahay, iyagoo og inuu xaq yahay, baa Alle meela badan uu ku fadeexeeyay, waxaana aayadaha uu Ilaahay ku fadeexeeyay Yahuudda ka mid ahaa, aayadda cajiibka ah ee 5d ee suuradda Al Jumac.
Waxay aayaddaasi leedahay sida tan
( مَثَلُ الّذينَ حُمّلُوا التُّوراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ القَوْمِ الّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الظّالِمِين )
”Tusaalaha kuwii loo xambaaray xilkii Towraadda (Yahuudda) ee aanan gudan ee ku fashilmay, waa sida dameer kutubbo la dul saaray, oo aanan waxba ka fahmeyn waxa dulsaaran. Baas bay lahaadeen tusaalaha qoomka beeniyay aayadka Ilaahay, Eebbana ma hanuuniya qoom dulmi badan”. Al jumac: 5d.Subxanallaah!! Ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa Yahuudda sida dameer kutubbo la dul saaray oo aanan habayaraatee aqoon waxa dul saaran.Aayaddan Allihii weynaa ee waxidka ahaa uu ku xusay kitaabkiisa Quraanka markii uu ku tilmaamayay Yahuudda dameer kutub dul saaran yahay, waatan xaqiiqadeeda sawir cajiib ah oo mar dhaw laga soo qaaday mehrajaan lagu qabtay magaallada Qudus ee Barakaysan, taasoo ay Yahuuddu ku soo bandhigeen dameer inta dushiisa lasoo saaray waxyaabo lagu xardhay qoraallo halku dhig ah, dabeetana ay soo qaadeen.Waxaa cajiib ah, macna ahaan kutub, ama kitaab waa wax qoran marka loo eego dhanka luqadda, sida sawirka kamuuqatana dameerka dushiisa waxaa saaran qoraal aanu waxba ka ogeyn, balse kamid ah qoraallada ay qiimeyaan Yahuudda, maadaama uu yahay halkudhig lagusoo bandhigaya mehrajaankaasi.Xilli laga jooga 1400 sano iyo in ka badan ayaa Eebbe sarreeye uu xaaladdan ay ku sugan yahiin maanta Yahuudda inoogu sheegey kitaabkiisa Quraanka. Tanina waa mid kamid ah mucjisaadka Quraanka Kariimka. Subxanallaah!!Haddii aad sawirka sii fiirisa waxaa kuu sawirmaya in dhammaantoodu aanay dameerka waxba dhaamin, waayo waxaa cajiib ah jamac intaasi dhan inay u soo lebbistaan dameer dartiis iyo xaflad loo dhigaya. Taasoo mar kale ku tusineysa xaqnimada tilmaanta ay bixisay aayaddan Quraaniga ahi. Subxaanallaah!!
Afeef: Qormadani waxay u gaar tahay, qoraha iyo webka caasimada.net, lama daabacan karo idan la’aan.